ब्लग | Citizen Post News
एक पटक भियतनामका राष्ट्रपति हो चि मिन्ह भारत भ्रमणमा आएका थिए । सो भ्रमणको समयमा एउटा मिटिंगका क्रममा भारतका मन्त्रीहरु यसंग उनको कुराकानी हुन थाल्यो । सो सम्बादका क्रममा हो चि मिन्हले भारतीय मन्त्रीहरुलाई सोधे-'तपाईहरु के काम गर्नु हुन्छ ?' भारतीय मन्त्रीहरुले सहज रुपमा जवाफ दिए-'हामीहरु राजनीति गर्छौ ।' हो चि मिन्हले यो उत्तर बुझ्न सकेनन् । उनले फेरि सोधे-'मेरो मतलब तपाईहरुको पेशा के हो ?' भारती ... read more...
राधाको स्तुतिदेखि देवर्षि नारद चिढिएका थिए । गुनासो थियो कि उनी कृष्णलाई अथाह प्रेम गर्दथे फेरी पनि हर भक्त ‘राधे-राधे’ किन भन्थे । आफ्नो व्यथा लिएर श्रीकृष्णसंग पुगे । देखे कि श्रीकृष्ण भयंकर टाउको दुखाइले कराइरहेका थिए । देवर्षिलाई दया जाग्यो । उनले सोधे, 'भगवान ! के यस टाउको दुःखाईको कुनै उपचार छ । मेरो हृदयको रगतले यो पीडा शान्त हुन्छ भने म आफ्नो रक्त दान गर्छु ।’ श्रीकृष्णले ... read more...
आज लागू औषधबिरूद्धको लडाई दिवस् । मानिसहरू नबुझेर गॉजालाई लागूपदार्थ मानेर भ्रम छर्ने गरेको पनि आज देखिएको छ । दशौं हजार वर्षसम्म गॉजा खुला रहेको हाम्रो समाज आज भन्दा पहिले शान्त र विकसित रहेको मानिन्छ । गॉजा औषधी हो । मानवजाति र प्राणीजगतका लागि गॉजा अमृत हो । गॉजा खाएर कुनै रोग लाग्दैन र यसबाट विश्वमा आजसम्म १ जना पनि मरेको रेकर्ड छैन । अरू लागू पदार्थको दुर्ब्यसनीको दुर्ब्यसन हटाउन पनि गॉजाले ठ ... read more...
हाम्रो हात कस्तो परिस्थितिमा बढी जसो अनुहारमा पुग्छ ? ख्याल गर्नेहो भन्ने सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ । जस्तो चिन्तित वा निराश भएको बेला अनुहारमा हात राखेर झोक्राइरहेका हुन्छौं । डराएका बेला हत्त न पत्त हातले अनुहार छोप्छौं । रोएका बेला हात अनुहारमा नै पुगेको हुन्छ । रुँदा कि त अनुहार छोपिरहेका हुन्छौं कि आँखा मिचिरहेका हुन्छौं । लजाएको समयमा पनि अनयासै हाम्रो हात अनुहारमा पुगि सकेको हुन्छ । खुसीको ... read more...
बेसार एक बहूउपयोगी बनस्पती हो । एसियाली मुलुकहरुमा भेटिने विभिन्न उपचार पद्दतिहरुमा सयौं बर्ष देखि बेसारको प्रयोग हुँदैआएको कुरा सर्बविदितै छ । नेपाल र भारत जस्ता देशहरुका प्राय भान्छाहरुमा यो बनस्पति मसलाको रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । बेसारको महत्व थाहा पाएर संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित मिसिसिपी बिश्वबिद्यालयको स्वास्थ्य बिज्ञान केन्द्रले त बेसारको प्याटेन्ट अधिकार (patent rights) नै लिएको थियो । तर, ... read more...
यसरी बिकशित भएको थियो 'हिन्दू धर्म'
२०७७ असार ६ गते १४:५०
एक जना आमाले आफ्नो पूजापाठबाट फुर्सद निकालेर आफ्नो विदेशमा रहेको छोरासँग भिडियो च्याट गर्ने बेलामा सोधिन्, 'बाबु ! आजकल पूजापाठ पनि गछौं कि नाइँ ? छोरोली भन्यो, 'मम्मी, म एक जीव बैज्ञानिक हुँ । म अमेरिकामा मानव बिकासप्रति रिसर्च गर्दैछु । बिकासको सिद्धान्त, चाल्र्स डार्विन । के हजुरले उसको बारेमा सुन्नु भएको छ ? छोराको प्रश्नले आमा मुस्कुराइन । र, भनिन्, 'मैले डार्विनको बारेमा सुनेकी पनि छु अनि पढ ... read more...
'भारतको यस्तो कुनै युद्ध छैन, जुन गोर्खा सैनिकले नलडेको होस्'
२०७७ असार ५ गते १२:२८
इण्डो-चाइना दुई देशका सैन्य अधिकारीबीच वार्ता भइरहेको भन्ने खबर आइरहेका बेला पूर्वी लद्धाखको गल्वान क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप हुन पुग्यो । गल्वान चीन र भारतको सीमा रेखाको क्षेत्र हो । यहाँ दुवै पक्षबीच सन् १९७५ देखि तनाब रहेता पनि झडपमा भारतीय सेनाको ज्यान गएको यो पहिलो पटक हो । त्यस यता थुप्रै चरणका वार्ता भए । तर पनि तनाव भने कायमै रहेको छ । एक उच्छ सैनिक अधिकारीसहित २० जना भारतीय सेनाहरुको ज्यान ... read more...
मलाई लाग्छ गलत समयमा गरेको सही काम पनि गलत नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल र आफूसमेतको तीन चौकडीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि गलत समयको सही काम हो । यहाँ म महाभारतको एउटा प्रसँग उठाउन चाहान्छु । सिद्धिप्राप्त शक्तिशाली योद्धाले एउटा वाण प्रहार गर्दा लक्ष्यभेदन गर्नुपूर्व सयौंको संख्या वाणहरू देखिन्छन् । र, मार पनि ह ... read more...
लकडाउन कहानी-१ रामेछापको एउटा कुनामा जन्मेको म जहा माध्यमिक स्कूल समेत थिएन । टोकरपुर गाँउ आफैमा अति शुन्दर, दुई खोलाले घेरीएको, शैलुङमुनीको त्यो गाँउ, गाँउको शिरानमा जंगल, पुछारमा सुन्दर धान खेतको त्यो हरियाली फाँट, अति सुन्दर र मनोरम निरन्तर सुसाई रहेको दुई खोला । लाग्छ म स्वर्गमा जन्मे, हुर्के । कक्षा ७ को परिक्षा पछि माध्यामिक शिक्षाको पढाईको लागि नजिकैको गुन्सीभदौरे गाँउमा अबस्थित माध्यमिक स् ... read more...
जानी राखौंः को-हो हुन् मनुष्यको तीन मित्र ?
ज़िन्दगी बदल्नलाई लड्नु पर्दछ, सजिलोको लागि जिन्दगी के हो ? बुझ्नु पर्दछ ! संसारमा हामी मनुस्यको सबै मित्र हुन्छन् ,त्यसमा पनि हरेक व्यक्तिको तीन मित्र हुन्छन् । हृदयमा राम्रो बिचार हुन्छ भने सबै बस्तु राम्रो देखिन्छ , सोच नराम्रो भयो भने नराम्रो नै देखिन्छ । एक व्यक्ति थियो जसको तीन मित्र थिए ।एक मित्र जसले सदैव साथ दिन्थ्यो ।एक पल, एक क्षण पनि बिछोड़ हुदैन थियो । दोश्रो मित्र जो साँझ बि ... read more...
वाह त्यो संस्कार !
एक राजाको घोड़ीको एक काना बच्चा थियो । बच्चाले आमासँग त्यसको कारण सोध्दा घोड़ीले भनिन्, 'जब म गर्भवती थिएँ, राजाले मलाई कोर्रा मारे । जसको कारण तँ काना भईस् ।' घोडीको कानो बच्चालाई राजाप्रति रिस उठ्यो र भन्यो,'म बदला लिन्छु ।' आमाले भनिन्,'राजाले हाम्रो पालनपोषण गरेका छन्, तँ स्वस्थ छस्, सुन्दर छस्, उनैको पोषणले त हो ।' तर बच्चाले राजासँग बदला लिने बिचार गर्यो । एक दिन राजाले उसलाई युद्ध ... read more...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बिलम्ब गर्दै आएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल समेत जोडिएका कारण अख्तियारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पर्खिरहेको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको ... read more...
एउटी छोरीले आफ्नो पितालाई सोधिन-बाबा मैंले आफ्नो शरीरको कति हिस्सा ढाकु र कति हिस्सा खुला छोडी दिउँ ? बाबाले धेरै सुन्दर जबाब दिए-छोरी जति हिस्सामा तिमी नर्कको आगो सहन सक्छौं, त्यति नै हिस्सा खुला छोडी देउ । छोरीले सोधिन-यस्तो किन बाबा ? बाबाः किनकी शरीरको अंग ढाकनु धेरै जरूरी हुन्छ । तिमीले श्रीकृष्णले गोपिनीहरुको कपड़ा चोरेको कहानी त सुन्यौं होली । जब गोपिनीहरु तलाउमा निर्वस्त्र भएर नुहाए । ... read more...
तुलसी (बिरुवा) पूर्व जन्ममा एक युवती थिइन । जसको नाम वृन्दा थियो । उनको राक्षस कुलमा जन्म भएको थियो । बाल्य कालमा नै भगवान विष्णुको भक्त थिइन उनी । बडो प्रेमले भगवानको सेवा, पूजा गर्थिन् । जब उनी ठुली भइन उनको विवाह राक्षस कुलको दानवराज जलान्धरसँग भयो । जालन्धर समुन्द्रबाट उत्पन्न भएको थियो । वृन्दा पतिव्रता स्त्री थिइन । सदा आफ्नो पतिको सेवा गर्थिन् । एक पटक देवता र दानवहरुबीच युद्ध भयो । जलान्धर ... read more...
लिम्पियाधुरादेखि, लिपुलेक र कालापानी ईण्डियाको भएको ईण्डियन दाबी हो भने काश्मिर, खालिस्तान र उत्तरपूर्वी (७ प्रदेशहरु) स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् भन्ने हाम्रो दाबी छ । इण्डियामा चलिरहेका स्वतन्त्रता आन्दोलनहरुको पक्षमा नेपाली आवाज बुलन्द गरौं । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफूतिर हालेर नक्शा प्रकाशित गरेको ईण्डियाले नक्शामा आफ्नै भूभाग मात्र समेटेको भनि दिएको स्पष्टिकरणले के देखाउँछ भने त्यसले कालापा ... read more...
संस्कृत भाषालाई प्रिय र सम्पर्क भाषा बनाएर समृद्ध बन्नतिर लाग्न सकिन्छ । यो भाषामा ज्ञानविज्ञान, अध्यात्म, दर्शनको विपूल खानी लुकेको छ । हामीले गर्व गर्ने ईतिहास, संस्कृति भनेकै यही न हो, नत्र हामी को हौं भनेर चिनाउने धरातल नै मासिने छ, मासिदै छ तर मासिन दिनुहुन्न । यसो भन्दैमा यो भाषा स्कूल कलेजमा पढ्न पढाउन अनिवार्य भने बनाउनु हुँदैन । स्वेच्छिक र एक्स्ट्रा क्लास लिन मिल्ने सुविधा भने सबै ठॉउमा ... read more...
'एनआरएन प्रतिनिधि जेलबाट छुटेका कैदी झैं'
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एकताका भनेका थिए-]नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ', जुन कुरा विदेशमा बसेका नेपालीहरुले आफ्नो जन्मभुमिमा एनआरएन सम्मेलन मार्फत पुष्टि गरिदिए । विदेशमा बस्दा कडा अनुशासनमा बस्नु परेकाहरु नेपाल जाँदा जेलबाट भर्खर छुटेका कैदीहरुझै देखा परे र त्यस्तै व्यवहोरा देखाए । उनीहरु मातृभूमीको भौतिक सम्पत्ति तोडफेड गर्नेदेखि गुण्डागर्दीसम्म उत्रिए । जस्ले गर्दा विदेशमा बस्ने ८० ... read more...
भारत र चीन दुवैले (मिलेर साच्चैनै) चाहे भने नेपालको नक्सा सदाको लागि अन्त गरिदिन सक्छन् । त्यतिबेला राष्ट्रसंघले चिन्ता व्यक्त गर्न बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैन् । हाम्रो देशको सीमा जोगाउन भनेर पैसा र ज्यान फालेर युद्ध गर्न (अहिलेको मितिसम्म) कुनै देश आउने देख्दिन । हामीसँग त्यस्तो अन्तिम अश्त्र नै छैन् । भारतले सुस्त अतिक्रमण गरिरहँदा चीनले चुप लागिदिए पनि पुग्छ । अहिले भारतले यस्तो आँट झट्टै गर्न ... read more...
नेपाल र भारतका प्रायः सबै भाषा संस्कृत भाषामा आधारित छन् । संस्कृत भाषा हामी सबैको निकट जननी भाषा हो । अहिले नेपालीहरू भाषा पीडित बन्दै गएको देखिदै छ । भाषा बुझेर, पढेर, बोलेर मात्र पुग्दैन , यसमा कमाण्ड हुन सक्नुपर्छ । नेपालीहरूमा अहिले न नेपाली भाषामा, न हिन्दीमा, न अंग्रेजी, न अन्य प्रमुख नेपाली भाषाहरू (मैथिली, हिन्दी, नेवारी, मगराती, तमू थारू, अवधी, भोजपुरी, शेर्पा, डोटेली ) मा कमाण्ड देखिन्छ ... read more...
सुन मेरो सहयात्री !
सुन मेरो सहयात्री ! सृष्टिको रचयिताले जब हामीलाई बनाए.म र तिमी स्त्री र पुरुष ।दुवै नै मनुको सन्तान,दुबैले पायौं ईश्वरको प्रेम पनि समान । तर बनाए एक-अर्काको पूरक,तिमीलाई दिए बुद्धिको साथ शक्ति ।र मलाई बुद्धिको साथ सौन्दर्य,ताकी चलिरहोस यो संसार निर्वाध।नरोकियोस सृष्टिको प्रवाह । परस्परमा मिलेर जीउँ हामी सहजीवन,म तिम्रो माता भगिनी पुत्री प्रिया ।तिमी मेरो पिता सहोदर पुत्र प्रियतम,कति सुन्दर जीवन, आ ... read more...